अन्वेषण अधिकारी | Ratopati
‘फिल्मको आधारभूत आवश्यकता नै स्वतन्त्रता हो’ access_timeकात्तिक २५, २०७८
दबिएर बसेका समुदाय २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि अधिकारको खोजीमा लगातार सडकमा आउन थाले । यही समय जागरण मिडिया सेन्टरले जनअधिकारको पक्षमा एउटा शृङ्खला तयार गर्ने योजना बनायो । र, संस्थाका महासचिव पूर्णसिंह बराइलीलाई त्यस शृङ्खलाको निर्माण पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।&n...
महाकवि देवकोटाको भत्किएको घर ! access_timeकात्तिक १८, २०७८
सरकारले २०४८ सालअघिकै स्वरुप कायम हुनेगरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मैतीदेवीस्थित घर पुनर्निर्माण गर्न थालेको छ । गत भदौमा महाकवि देवकोटाको घर भत्काइएको थियो । देवकोटाको घर भत्काएकोमा संस्कृतिविदहरुले सरकारको आलोचनासमेत गर्दै आएका छन् । पछिल्लो एक साता...
राम मन्दिरको सेवामा कान्छी गुरुङको तीन पुस्ता access_timeअसोज २८, २०७८
२०७२ सालको भुँइचालोले कान्छी गुरुङको सातो लियो, जसकारण अहिले पनि हात काँप्छन् । खुलेर बोल्न अप्ठ्यारो छ । तर, यसका बाबजुद मन्दिरको सेवामा उनले आफ्ना औँलाहरू नियमित खियाइरहेकी छिन् । ‘यहाँ बस्न थालेको ६० वर्ष भयो, पहिले मन्दिरबाहिर जंगलै जंगल थियो, स्याल कराउँ...
वैष्णव पुजारीको बखान : आत्मा परमाणु जत्रै हुन्छ access_timeअसोज २७, २०७८
कति राजनीतिक नेताको मात्रै अन्तरवार्ता लिनु ? दसैँका बेला हामी सात्त्विक मानिसका कुरा सुन्न र सुनाउन काठमाडौँको प्रसिद्ध श्री बैंकटेश मन्दिरभित्र छि–यौँ, यो मन्दिर वैष्णव सम्प्रदायमाझ प्रख्यात छ । दसैँको चहल–पहल सुरु भएसँगै यहाँ दैनिकरुपमा नवरात्रको आराधना च...
​बूढीगण्डकीले सुकुम्बासी बनायो, बिजुली निस्किएन access_timeअसोज १३, २०७८
भनिन्छ, विकासले जनतालाई उठीबास होइन, उनीहरुको जीवन सहज बनाउन सक्नुपर्छ । तर, राज्य सञ्चालकहरुको अपरिपक्व नीतिका कारण कसरी विकासका नाममा जनतामाथि थिचोमिचो हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको छ बूढीगण्डकी आयोजना । यो आयोजनाका कारण कयौं मानिसहरु विस्थापित बनेका छन् ।...
‘काठमाडौँमा ७ हजार गाई बेवारिसे छन्,पशुपतिमा अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँ छैन’ access_timeअसोज ८, २०७८
सुरुमा कतिले उनलाई पागल भने । कतिपयले ‘हिन्दु राज्य फर्काउन’ अभियान चलाइरहेको आरोप लगाए । कतिले गाई तस्करी गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए । यी सबै आरोपहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै ६१ वर्षीय आरबी न्यौपाने विगत लामो समयदेखि सडकमा छाडा छोडिएका गाई–बाच्छाको...
पुरोहित बाजे भन्छन्– बाहुनलाई सरकारले थितिमा राख्नुपर्छ access_timeअसोज ६, २०७८
पुरोहित भीमप्रसाद पराजुली ७८ वर्षका भए । पहिलो लहरको कोरोनाकालमा उनी कर्मकाण्डका दैनिकजसो पशुपतिनाथ आउँथे र कर्मकाण्ड गर्थे । लकडाउनपछि उनी आक्कल–झुक्कलमात्रै पशुपति आउँछन् । सोह्र श्राद्ध सुरु भएकाले लामो अन्तरालमा सोमबार उनी पुनः पशुपतिमा झुल्किए । पशुप...
उखु किसानको व्यथा : मर्दा पनि छाडेन ऋणले ! access_timeभदौ ११, २०७८
गत साल तराईका उखु किसानले काठमाडौँमा १६ दिनसम्म धर्ना दिए । त्यही क्रममा हृदयाघातले नारायण राय यादवको मृत्यु भयो । ०७४ सालदेखि बेचेको उखुको २४ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन आन्दोलनमा होमिँदासम्म यादवले बैङ्कबाट लिएको ऋण बढेर २५ लाख पुगिसकेको थियो । ...
नेपाललाई अफगानिस्तानको पाठ : तालिबानभन्दा भ्रष्टाचार खतरनाक ! access_timeभदौ ४, २०७८
कापी–कलम किन्ने पैसा नभएपछि एक बालकको मस्तिष्कमा भगवान गुहार्ने योजना फुर्याे । उनले १० रुपैयाँ माग्दै भगवानका नाममा चिट्ठी लेखे, राजालाई भगवान ठान्ने हुलाकका एक कर्मचारीले उक्त पत्र दरबार पठाइदिए । राजाले आफ्ना अर्थमन्त्रीलाई रकम निकासा गर्न आद...
काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल कि मेट्रोरेल ? access_timeसाउन २०, २०७८
काठमाडौँ उपत्यकामा रेल कहिले गुड्छ ? काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई तीन वर्ष अघिसम्म यो प्रश्न निकै प्यारो लाग्थ्यो । तर, अहिले यसैले उनलाई गिज्याउन थालेको छ । काठमाडौँमा आफ्नै कार्यकालमा मेट्रोरेल, मोनोरेल सञ्चालन गर्ने, स्मार्ट सिटी बनाउने लग...
मार्चपासमा चम्केको नेपाल पदक तालिकामा गायब ! access_timeसाउन १८, २०७८
नेपालले सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकबाट खेलकुदको महाकुम्भमा सहभागिता जनाउन थाल्यो । ५७ वर्षपछि टोकियोमै ओलम्पिक मार्चपासमा गौरिका सिंह र एलेक्स शाहले नेपालको झण्डा बोके । तर, यसपटक पनि नेपाली खेलाडी पदकविनै घर फर्कँदैछन् । आखिर, नेपालले किन जित्न सकेन ओलम्पिक पदक...
काँग्रेसको मुख्यालय, जहाँ रमिता छ ! access_timeसाउन १३, २०७८
सिंहदरबार र बालुवाटारको साँचो अहिले नेपाली काँग्रेसका हातमा छ । तर, सानेपास्थित काँग्रेस मुख्यालयको दृश्य भने सत्तारुढ दलको कार्यालयजस्तो नभएर आन्दोलनकारीको अखडाजस्तै बनेको छ । बुधबार रातोपाटीको टिम नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ रमिता ...
टिओडी मिटरका आधारमा पैसा तिर्छौँ, नलिएको सेवाको पैसा कसरी तिर्ने ? access_timeसाउन ७, २०७८
पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुललाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी–व्यापारीबीच विवाद चुलिएको छ । प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउन उद्योगीहरुलाई भनेको थियो । किस्ताबन्दीमै रकम तिर्ने भएपनि ...
रङ्गशालाबाहिर कवाडी उठाउने ती कान्टे, विश्वविजेता यी कान्टे ! access_timeअसार १, २०७८
युरोकप फुटबलमा आफ्नो कला देखाउनका लागि युरोपकै उत्कृष्ट खेलाडीहरू तमतयार छन् । फ्रान्सका एनगोलो कान्टे यी खेलाडीहरूमध्ये एक हुन् । उनको सङ्घर्ष र सफलता दुवै उच्च छ । धेरैलाई थाहा छ उनी २०१८ मा फ्रान्सलाई विश्वकप जिताउने टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन् । भर्खरै चेल्सीलाई य...
प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको नजरमा जोर्डनविरुद्ध कहाँ चुक्यो नेपाल ? access_timeजेठ २५, २०७८
जोर्डनसँग ३–० ले पराजित भएपछि विश्वकप छनोटको आगामी चरणमा पुग्ने नेपालको संभावना समाप्त भएको छ । तर, एशिया कपको आगामी चरण पुग्ने सम्भावना जीवितै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली राष्ट्रिय टिमसामु के–कस्ता चुनौती छन् ? यही विषयमा पूर्व खेलाडी तथा राष्ट्रिय टिमका प...
कोरोना जितेलगत्तै सडकमा, भोका जनावरदेखि मानिसको सेवामा access_timeजेठ ११, २०७८
२०७६ चैतमा लकडाउन भएसँगै काठमाडौँ ठप्प भयो । होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द भए । कोरोनाको त्रास चौतर्फी थियो । सडकका जनावर भोकले मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । काठमाडौँ कमलपोखरीका सौरभ रिमालको मनले घरभित्रै थुनिएर बस्न मानेन, पशुपन्छीलाई खाना खुवाउन उनी ग...
‘राष्ट्रपतिले जनता र संविधानलाई गिज्याइन्, प्रधानमन्त्रीले शपथलाई मजाक बनाए’ access_timeजेठ १, २०७८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ विवादमा तानिएको छ । शपथ ग्रहणका क्रममा ओलीले मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । शपथका क्रममा राष्ट्रपतिले ‘....
महामारीले देश–दुनियाँ आक्रान्त छ, बुधबार एकैदिन देशमा अहिलेसम्मकै उच्च ८६५९ जनामा कोरोना देखियो, ५८ जनाले ज्यान गुमाए । मंगलबार पशुपतिमा शव दहनको रिपोर्टिङ सकेर हामी न्युरोडतर्फ हान्नियौं, जहाँ सुनसान सडकमा नाम्लो बोकेर निराश अवस्थामा बसिरहेका एक ...
कुशललाई आयोजकले छक्का नहान् भनेपछि... access_timeबैशाख १८, २०७८
‘यसरी खेल्न लेखेको रहेछ र पो मलाई डिस्टर्ब गर्दोरहेछ !’ शनिबार नेदरल्यान्डस विरुद्ध कुशल भुर्तेलले ७७ रन बनाएपछि रोशन शर्माले भने । कुशलले प्रहार गरेका हरेक चौका–छक्कामा रमाउँदै भिडियो खिच्न व्यस्त थिए शर्मा । ‘उसमा क्रिकेटको भोक भाञ्जा...
खोप लगाउन जाँदा कोरोना बोकेर फर्कनुपर्ने त्रास ! access_timeबैशाख १४, २०७८
ललितपुरको बालकुमारीबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन मंगलबार सबेरै निस्किएका राम तामाङ ४ घण्टा लाइनमा बसे । लगातार चार घण्टासम्म भीडमा उभिएपछि बल्ल उनी निदान अस्पतालको मुलगेटनजिक पुगे । तर, १२ बजेपछि लाइन रोकिएको रोकियै भयो । अस्पतालमा खोप थियो, तर खोप...
‘मेरै टाउकोमा धरहरा खस्यो ! मानिसहरु अझै सोध्छन्, ‘कसरी बाँचिस् ?’ access_timeबैशाख ११, २०७८
आजभन्दा ५ वर्षअघि । अर्थात् १२ वैशाख, २०७२ । दिउँसो ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको प्रलयकारी महाभूकम्पमा ढलेको सुन्धारास्थित धरहरा पुनर्निर्माण भएर फेरि ठडिएको छ । भूकम्पले ढाल्दादेखि पुनर्निर्माणसम्मको अवस्थालाई नजिकबाट नियालेका स्थानीयको धरहरासम्बन्धी अनुभव भने निकै अविस्मरण...
उड्यो ठमेलको चमकधमक रङ्ग, अब रात्रिकालीन व्यवसायमा खतरा access_timeचैत २९, २०७७
काठमाडौं । कतै बाँसुरी र सारङ्गीको सुरिलो आवाज त कतै ड्रमसेटको लाउड साउन्ड, कतै दोहोरी घन्किरहेको हुन्थ्यो त कतै हेभी मेटल गीत । रातभर पार्टी जम्थ्यो । स्वदेशी र विदेशीको भिड थामिनसक्नुहुन्थ्यो र पो नयाँ वर्ष आएजस्तो हुन्थ्यो ठमेलमा । रुसी पर्यटन व्यवसायी केटको सम्झनाम...
नेपाली फुटबलका अँध्यारा पक्ष access_timeचैत २९, २०७७
पूर्वखेलाडी कृष्ण गुरुङ अहिले नेपाली फुटबल फ्यानहरुको संस्था ‘हाम्रो फुटबल नेपाल’का अध्यक्ष छन् । फुटबल खेलाडीहरुले सामना गर्नुपरेका चुनौती के–के छन् ? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन कत्तिको सन्तोषजनक छ ? फ्यानहरुलाई समेटेर फुटबलको बृहत्तर विकास गर्न एन्...